RawTherapee 5.6 inouya nepseudo-HiDPI rutsigiro uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Munguva pfupi yapfuura kuvhurwa kweshanduro nyowani yechirongwa RawTherapee 5.6 yakaziviswa, chinova chirongwa chinopa maturusi ekugadzirisa mapikicha uye kushandura mifananidzo kuRAW.
RawTherapee Zvinotaridza kuve nekugona kuve nerutsigiro rwekuti ukwanise kutsigira huwandu hwakawanda hweRAW mafomati emafaira, kusanganisira makamera ane Foveon uye X-Trans sensors, uye anogona zvakare kushanda pamwe neAdobe DNG yakajairwa uye neJPEG, PNG uye TIFF mafomati (anosvika makumi matatu nematatu pachiteshi).
1 Nezve RawTherapee
2 Chii chitsva muRawTherapee 5.6?
3 Maitiro ekurodha pasi nekumisikidza iyo nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.6?
RawTherapee inopa seti yezvishandiso kururamisa kubereka kwemavara, gadzirisa chena chiyero, kupenya uye kusiyanisa, pamwe nekungogadzira mufananidzo wekuwedzera uye ruzha kudzikisira mabasa.
Zvakare iko kunyorera inoshandisa akasiyana maalgorithms ekumisikidza yemhando yemhando, gadzirisa mwenje, bvisa ruzha, wedzera ruzivo, rwisa mimvuri isingakoshi, makona akajeka uye maonero, otomatiki bvisa pixels dzakaputswa uye shandura kuratidzwa, wedzera kupinza, bvisa kukwenya uye zvisaririra zveguruva.
RawTherapee inoenderana nepfungwa yekusaita-kuparadza kugadzirisa, yakafanana nemamwe mapurogiramu ekugadzirisa RAW.
Uye izvi imhaka yekuti izvo zvigadziriso zvakaitwa nemushandisi kumifananidzo iyo yavanoshanda mukushandisa hazviitwe pakarepo kumufananidzoPanzvimbo iyoyo, ma parameter anochengetwa mune yakasarudzika faira faira (Mushandisi achiri kuona mhedzisiro yeese marongero mune inotariswa windows).
Chaizvoizvo zvigadziriso kumufananidzo zvinoshandiswa panguva yekutumira kunze. RawTherapee inogona kushanda neRAW mafaera kubva kudhijitari kamera, uye nemifananidzo mune yakajairwa fomati.
Kana ichiverenga maRAW mafaera, inoita saizvozvo kuburikidza nechirongwa chedraw, kungoishandura kuti ive mufananidzo wekuenderera mberi kugadzirisa.
Nekuda kweizvi, RawTherapee inogamuchira mafomati ese anotsigirwa ne dcraw, iyo inogara ichivandudzwa kutsigira matsva kamera kamera
Pamusoro peizvi, RawTherapee inotsigira anotevera mafomati emifananidzo:
Iyo kodhi yeprojekti yakanyorwa muC ++ uchishandisa GTK + uye ikagoverwa pasi peGPLv3 rezinesi.
Chii chitsva muRawTherapee 5.6?
Mune iyi vhezheni itsva yeRawTherapee 5.6 Tsigiro yemanyepo-HiDPI modhi inomira kunze sechinhu chikuru, iyo inobvumira iyo interface kuti iwedzerwe kune akasiyana screen saizi.
Chiyero chinoshanduka otomatiki zvichibva paDPI, saizi yefonti, uye masystem escreen. Nekutadza, iyi modhi yakaremara (inogoneswa muKufarira> Zvakajairika> Chitarisiko).
Imwe shanduko yakaunzwa mukuburitswa kutsva iyi itsva Favorites tebhu maunogona kufambisa zvinowanzoshandiswa maturusi aungade kugara uripo.
Uye zvakare, ivo vanogadzira RawTherapee vakashanda zvakanyanya pane iyi vhezheni vhezheni kubvira pavakagadzira akasiyana siyana magadziriso ekushandisa kuchikumbiro.
Sezvo kuchine zvimwe zvinetswa nekutsikisa dialogs kana uchishandisa GTK + vhezheni 3.24.2 kusvika 3.24.6 (GTK + 3.24.7+ yakakurudzirwa). Basa izvozvi rinodawo librsvg 2.40+.
Kune rimwe divi, iyo "Hapana clip" yekugadzirisa profile yakawedzerwa, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuchengetedza mufananidzo, ichisiya iyo data mune yese tonal renji.
Mune masystem (Zvaunofarira> Performance), zvaikwanisika kudarika huwandu hwezvimedu zvemifananidzo zvakagadziriswa mune yakasarudzika tambo (mataira patambo imwe, iyo yekupedzisira iri 2).
Maitiro ekurodha pasi nekumisikidza iyo nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.6?
Kune avo vanofarira kugona kuwana iyi nyowani vhezheni yeRawTherapee 5.6 unogona kuwana iyi vhezheni itsva nekushanyira yavo yepamutemo webhusaiti kwaunogona kuwana akasiyana installers ekushandisa (Windows, Mac uye Linux).
Saka kune yedu kesi "Linux" isu tinogona kuwana iyi nyowani vhezheni nekurodha pasi yayo AppImage.
Izvi zvinogona kuitwa nekuvhura terminal uye mairi kuita unotevera kuraira:
Waita kurodha pasi izvozvi isu tinofanirwa kuchipa mvumo yekuuraya ne:
Uye ivo vanogona kumhanyisa iyo application nekudzvanya kaviri pafaira kana kubva kune iyo terminal ne:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » RawTherapee 5.6 inouya nepseudo-HiDPI rutsigiro uye nezvimwe